किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन अनलाइन प्रणाली ? के भन्छन् सरोकारवाला ?
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाली सेयर बजारमा लञ्च भएर पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको सफलतासँगै नेपालको सेयर बजारका लागि कोशेढुंगा साबित हुने बताइने गरिएको छ । यो ईन्टरनेटको माध्यमबाट संसारको जुनसुकै ठाउँबाट लगानीकर्ता स्वयंले विभिन्न धितोपत्रहरु खरिदबिक्री आदेश प्रविष्ट गरी कारोबार...
काठमाण्डौ । बैंक र डिम्याट इन्टीग्रेसनबिनाको जोखिमपूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली नेप्सेले आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । सेयर कारोबार पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनको ग्राण्ड लञ्च गरिएको एक महिना ३ दिनपछि ब्रोकरले पत्याएका केही सीमित लगानीकर्ताहरुले मात्र चलाउन पाउने गरी प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न खोजिएको...
बैंक र डिम्याट इन्टीग्रेसनमा गञ्जागोल, नेप्से र वाइकोको चलखेल !
-भक्तराज रसाइली काठमाडौ । आगामी मङ्सिर २३ गते(आइतबार)देखि ब्रोकरले विश्वास गरेका सीमित सेयर लगानीकर्ताहरुलाई अनलाइन ट्रेडिङका लागि युजर नेम र पासवर्ड दिने तयारीमा नेप्से लागे पनि त्यसका लागि महत्वपूर्ण कडी मानिएको बैंक र डिम्याट इन्टीग्रेसनमा भने गञ्जागोल स्थिति सिर्जना गरिएको छ । विश्वस्तरीय अनलाइन ट्रेडिङ लञ्च भएको दाबी...
धितोपत्र बोर्ड भन्छ-‘अनलाइन प्रणालीमा चरम लापरबाही भो’
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीमा चरम लापरबाही भएको धितोपत्र बोर्डले स्वीकार गरेको छ । शुक्रबार मागपत्र बुझाउन जाउलाखेल पुगेका लगानीकर्ताहरुको अगाडि बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले अनलाइन प्रणालीमा चरम लापरबाही भएको स्वीकार गरेका हुन् । देशको सेयर बजारको नियामकले अनलाइन प्रणालीमा लापरबाही भएको भनी टिप्पणी...
अनलाइन ट्रेडिङको तालिम दिंदै नेप्से, सहभागी हुन के गर्नुपर्छ ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली चलाउन लगानीकर्तालाई तालिम दिने भएको छ । पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार नेप्सेले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी मंसिर १६ गते आइतबारदेखि तालिम दिन थालिने बताएको हो । वरिष्ट आइटी अधिकृत निशा तिमिल्सिनाका अनुसार मंसिर १६ गतेदेखि २० गतेसम्म अपरान्ह ३ बजे र २१ गते...
नेप्सेले भन्यो–‘अनलाइन आउनेबित्तिकै सेयरको मूल्य बढ्दैन, यो भ्रम हो’
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेडले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली आउनेबित्तिकै सेयरको मूल्य बढ्छ भन्ने भ्रम त्यागिदिन लगानीकर्ताहरुमा आह्वान गरेको छ । लगानीकर्ताका संघ संगठनहरुले अनलाइन आएपछि पनि बजार र सेयर मूल्य घटेको भन्दै नेप्सेमा ज्ञापनपत्र बुझाई बजार लगातार घटिरहे आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिइरहेकै बेला...
लगानीकर्ताको हातमा कहिले पुग्ला अनलाइनको साँचो ? बिहीबार मिति घोषणा हुँदै
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेडले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली पूर्ण रुपमा लगानीकर्तालाई चलाउन दिने मितिको घोषणा बिहीबार गर्ने भएको छ । हालसम्म ब्रोकरमार्फत मात्र लगानीकर्ताको पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीमा सहभागिता रहँदै आएको छ । यहीकारण लगानीकर्ताले पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको अनुभव गर्न...
अनलाइन कारोबारमा नेप्सेले ठगी गरेको आरोप, साना लगानीकर्ता मर्कामा
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दाबी गरेको अनलाइन ट्रेडिङ सफ्टवेयरकाका कारणले साना लगानीकर्ता ठगिएको रहस्य पत्ता लागेको छ । ४१६६.६७ रुपैयाँसम्मको सेयर खरिद खरिद गर्दा २५ रुपैयाँ कमिसन लिइनुपर्छ, तर नेप्सेले भित्र्याएको नयाँ टीएमएस सफ्टवेयरले फ्ल्याटमा ०.६ प्रतिशतका दरले कमिसन लिईरहेको...
यस्तो रहेछ अनलाइनमा अलमलको भित्री रहस्य !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । विगत लामो समयदेखिको पूर्ण स्वचालित अनलाइन पर्याप्त तयारीबिना र प्रशस्त पूर्वाधार नबनाई हतारमा समुद्घाटन गरेर अहिले नेप्सेले सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि भित्राएको दाबी गर्ने नेप्सेले अनलाइन कारोबार गर्दा आवश्यक पर्ने सेयर लगानीकर्ताहरुको बैंक खाता समेत इन्टिग्रेसन...
स्थलगत:नेप्से र वाइकोका कर्मचारीको दिनरात एउटै, त्रुटि सच्याउन भ्याई नभ्याई
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली सुरु गरेको नेप्सेले सुरुवाती दिनमा निकै आलोचना खेप्नु परेको छ । प्रविधिका कुरा आम सर्वसाधारण र कर्मचारी तथा संस्थाबाहिरको पहुँच र स्वार्थमा टिक्दैन, तर केही अगुवा लगानीकर्ताहरुले भर्खरै जन्मेकोे अनलाइन प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न तिकडम पनि मच्याए, कतिपय...
अनलाइनमा समस्या आएपछि लगानीकर्तालाई नेप्सेको यस्तो आग्रह
काठमाण्डौ । निकै लामो समयको प्रतिक्षापछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीमा दिनहुँजसो समस्या आएपछि नेप्सेले लगानीकर्ता तथा ब्रोकरको नाममा सूचना जारी गरेको छ । नेप्सेले ब्रोकर तथा लगानीकर्तालाई केवाइसी अपडेट गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक जानकारी अपडेट नगराई ब्रोकरको प्रणाली(टिएमएस) कारोबार गर्न...
‘फेरि मक ट्रेडिङ हुँदैन, अनलाइन असफल बनाउने प्रयास सफल हुन दिँन्न’
-चन्द्रसिंह साउद(सीइओ)-नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बजारमा फेरि मक ट्रेडिङ हुने भन्ने हल्ला छ नि, खास कुरा के हो ? -फेरि मक ट्रेडिङ हुने भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो । हिजो केही लगानीकर्ताहरु नेप्सेमा आउनुभएको थियो । मैले हिजो पनि उहाँहरुलाई भनेकै हुँ, अहिले जुन समस्या देखिएको छ, त्यो यूसीसी नम्बरको समस्या हो । यो विषयमा हामीले सूचना पनि जारी गरिसकेका...
नेप्सेको स्पष्टीकरण–‘समस्या कारोबार प्रणालीमा होइन, ब्रोकरले कनेक्सन स्थापित गर्न सकेनन्’
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीमा समस्या आएको स्वीकार गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आइतबार कारोबारका क्रममा केही समस्या देखिए पनि नेप्सेको तर्फबाट त्यसको समाधान भइसकेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका हुन् । ‘नयाँ...
नेप्सेको वेबसाइट किन चलेन ? के भन्छन् सरोकारवाला ?
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाली पूजी बजारमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुरुवातसँगै लगानीकर्ताहरुलाई कारोबार गर्न सहज होला भन्ने आशा थियो । तर, पूर्ण अनलाइनको व्यग्र प्रतिक्षारत लगानीकर्ताहरुलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा जस्तो भएको छ । नेप्सेले निकै ठूलो खर्च गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार...
अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली: अर्को 'बुल'को आधार बन्ने विज्ञको दाबी
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । कात्तिक २०, मंगलबार नेपाली सेयर बजारले फड्को मारेको दिन । पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको औपचारिक सुरुवातसँगै विश्वभर फैलिएका लगानीकर्ताले एक क्लिकमा सेयर खरिदबिक्री गर्न सक्नेछन् । हकिङ्ग सिस्टम हुँदै २०६४ सालमा सेमी अनलाइन र आज २०७५ साल कात्तिक २० गतेको दिनबाट पूँजी बजारमा पूर्ण अनलाइन...